Dib u soo kabashada Outlook Express Xog laga helay Temporary Faylasha
Bogga ugu weyn Products DataNumen Outlook Express Repair Dib u soo kabashada Outlook Express Xog laga helay Temporary Faylasha
Goorma Outlook Express isku duuban faylka .dbx, wuxuu abuuri doonaa kumeelgaarrary .dbt faylka ka hoos gala isla faylka .dbx. Tusaale ahaan, haddii aad tahay fayl is-haysta Inbox.dbx, ka dibna ku-meel-gaadhka ahrary faylka wuxuu noqon doonaa Inbox.dbt.
Marka qaladku dhaco inta lagu jiro hawlgalka is haysta oo aadan marin ka heli karin galkaaga boostada mar dambe, sidoo kale kama soo kaban kartid xogta aad dooneysay feylka .dbx, ka dibna weli waa suurtagal in laga soo kabto xogtaada xilliga ku meel gaarka ahrary .dbt faylka, sida soo socota:
Soo hel galka meesha faylka .dbx ku kaydsan yahay.
Hubi inuu jiro kuleylrary .dbt faylka isla galka.
Hadday haa tahay, ka dib u beddel fayl kale oo leh kordhinta feylka .dbx, tusaale ahaan, haddii feylka .dbt loo yaqaan Inbox.dbt, ka dib waxaad ugu beddeli kartaa InboxTemp.dbx.
Isticmaal DataNumen Outlook Express Repair in lagu baaro feylka InboxTemp.dbx oo laga soo ceshto emailada.